xabsiga dhexe ee Jigjiga oo maxaabiis laga sii deynayo | Radio Baidoa
Guriga Wararka Maanta xabsiga dhexe ee Jigjiga oo maxaabiis laga sii deynayo
xabsiga dhexe ee Jigjiga oo maxaabiis laga sii deynayo
Waxaa maanta lagu wadaa in xabsiga dhexe magaalada Jigjiga ee dowlad degaanka Soomaalida Itoobiya laga sii daayo dadkii ugu badnaa oo maxaabiis ku ah xabsigaasi.
Maalmihii u dambeeyay xabsiyada ku yaalla wadanka Itoobiya waxaa laga sii deynayay dad aad u fara badan, kuwaasi oo arrimihii loo xiray ay ka mid ahaayeen dambiyo kala duwan arrimo nabadgelyo iyo kuwa kale.
Xabsiga Jeel Ogaadeeniya oo ku yaalla magaalada Jigjiga ayaa Hay’adda Human Rights Watch warbixin ay dhawaan soo saartay waxa ay ku eedeysay maamulka xabsigaasi inay ku tacadiyaan dadka maxaabiista ah.
Xabsiga ayaa la sheegayaa in maanta dad badan laga sii daayo, taasi oo qeyb ka ah qorshaha Ra’iisul Wasaaraha Itoobiya Aby Ahmed Ali oo uu ku doonayo inuu wax ka bedelo siyaasadii adeega ku dhisneyd.
Masuuliyiinta magaalada Jigjiga gaar ahaan kuwa ammaanka qaabilsan ayaa waxa ay sheegeen in maanta ay suuragal tahay in dad aad u badan lags sii daayo xabsiga, waxaana afaafka hore ee xabsiga goor sii horeysay gaaray dad ehel la ah maxaabiista xabsiga ku ku jirta.